Ngaba ufuna igqwetha loqhawulo-mtshato oza kukunceda?
Wonke umntu, uqhawulo-mtshato sesona siganeko siphambili. Yiyo loo nto abameli bethu boqhawulo-mtshato bekwinkonzo yakho neengcebiso zobuqu. Inyathelo lokuqala loqhawulo-mtshato kukutsala umnxeba kugqwetha. Uqhawulo-mtshato uxelwe yijaji kwaye yigqwetha kuphela elinokungenisa isicelo soqhawulo mtshato kwinkundla.
Wonke umntu, uqhawulo-mtshato sesona siganeko siphambili. Yiyo loo nto abameli bethu boqhawulo-mtshato bekwinkonzo yakho neengcebiso zobuqu.
> Amagqwetha ethu oqhawulo mtshato ayakuxhasa
> Ukuqeshwa nommeli woqhawulo-mtshato? Le yindlela olungiselela ngayo!
> Ulwazi malunga nokuqeshwa
> Ngawaphi amaxwebhu endifanele ndiwalethe?
> Eyakho inkampani kunye noqhawulo mtshato
> Inkqubo yobuqu kunye nesikhokelo
Inyathelo lokuqala loqhawulo-mtshato kukutsala umnxeba kugqwetha. Uqhawulo-mtshato uxelwe yijaji kwaye yigqwetha kuphela elinokungenisa isicelo soqhawulo mtshato kwinkundla. Kukho imiba eyahlukeneyo yezomthetho kwinkqubo yoqhawulo mtshato apho umgwebi aya kuphumeza umgwebo. Imizekelo yezi zinto zisemthethweni:
• Zisasazwa njani izinto zakho ezidibeneyo?
• Ngaba iqabane lakho langaphambili linelungelo kwinxalenye yomhlala-phantsi?
• Kuthekani ngeziphumo zerhafu zoqhawulo-mtshato?
• Ngaba iqabane lakho linelungelo lokulingana ne-alimony?
Ukuba kunjalo, yimalini i-alimony ngenyanga?
• Ukuba unabo abantwana, zisingathwa njani izinto ezinxulumene nabantwana?
• Inkxaso yomntwana ilungelelaniswa njani?
Amagqwetha ethu oqhawulo mtshato ayakuxhasa
Kukho imiba ethile ekupheliswa koqhawulo-mtshato. Ummeli woqhawulo-mtshato ovela Law & More inokukunceda kwaye ikukhokele ekucwangciseni ezi nkalo njengoko kunokwenzeka. Amagqwetha ethu akhethekileyo kwicandelo lomthetho wosapho. Ngaba unomdla wokwazi ukuba singakwenzela ntoni? Ke nceda unxibelelane Law & More.
Abameli bethu boqhawulo-mtshato banendlela yobuqu kwaye baya kusebenza kunye nawe ukufumana izisombululo ezifanelekileyo kwikamva. Sijonga kuwo onke amabakala asemthethweni kwaye sizabalazela ukufikelela kwesona siphumo sihle kuwe.
Izihloko esingakunceda ngazo zezi:
• Umtshato woqhawulo mtshato;
• Isicwangciso sokuba ngumzali;
• Isivumelwano sokukhulelwa;
Ukuhanjiswa kweeasethi ezidibeneyo;
• I -onyony yeqabane;
• Amalungelo abantwana okufikelela;
• Iziphumo zemali.
Ukuqeshwa nommeli woqhawulo-mtshato? Le yindlela olungiselela ngayo!
Wena neqabane lakho nisenzile isigqibo. Uqhawula umtshato. Kodwa yintoni elandelayo? Inyathelo lokuqala elibalulekileyo emva kwesi sigqibo sigqibeleleyo kukubiza igqwetha loqhawulo-mtshato. Emva kwayo yonke loo nto, xa uqhawulo-mtshato lulungisiwe, ayisiyiyo kuphela imiba eyahlukeneyo esebenzayo kodwa nezomthetho ziyavela: Kuza kwenzeka ntoni kwikhaya elidibeneyo kunye nokuphumla kwendlu, umzekelo? Luya kulungiswa njani ulwabiwo lweemali zakho ozongiweyo kunye neebhanki? Ngubani oza kukhathalela abantwana bakho mihla le okanye ngemali? Ukuze ukwazi ukukunceda kangangoko ngokunakho ngokulungisa nokurekhoda yonke imiba esemthethweni ejikeleze uqhawulo-mtshato, kubalulekile ukuba igqwetha lakho loqhawulo-mtshato libe nalo lonke ulwazi oluyimfuneko namaxwebhu.
Ulwazi malunga nokuqeshwa
Ngelixa ulungiselela intlanganiso kunye negqwetha lakho loqhawulo-mtshato, kubalulekile ukuba uxoxe ngemicimbi ebalulekileyo kunye neqabane lakho langaphambili. Ulibona njani ikamva emva koqhawulo mtshato ngokubhekisele kwikhaya lakho elihlanganisiweyo, imeko yezemali kunye nabantwana bakho abanokubakho? Ukuba sele sele kukho isivumelwano ngaphambi kokuba sityunjelwe, umzekelo ngokubhekisele endlwini okanye unakekelo lwemihla ngemihla malunga nokunxibelelana nabantwana bakho, ke igqwetha elidibeneyo loqhawulo mtshato linokukhawuleza ukurekhoda ezi zivumelwano kwisivumelwano soqhawulo-mtshato kunye nesicwangciso sokuba ngumzali.
Ngaba akunakwenzeka ukuba uxoxe kwaye wenze amalungiselelo adibeneyo kunye neqabane lakho langaphambili? Emva koko ungatsalela umnxeba igqwetha lakho eliza kuzama ukufumana esona siphumo sihle kuwe. Kwimeko enjalo, kusacetyiswa, xa ulungiselela intlanganiso kunye negqwetha lakho loqhawulo-mtshato, ukuba uzibuze ukuba yeyiphi imiba ebalulekileyo ongathanda ukuyisombulula kwaye ngayiphi indlela. Umzekelo, ngaba ungathanda ukuqhubeka uhlala endlwini kwaye unyamekele abantwana bakho imihla ngemihla? Kwimeko apho igqwetha loqhawulo-mtshato linokuxelela kanye malunga nokuba yintoni kwaye kufuneka icwangciswe kwaye uziva njani ngala malungiselelo.
Ngawaphi amaxwebhu endifanele ndiwalethe?
Kubalulekile ukuba uqokelele amaxwebhu athile abalulekileyo uze nawo kwi-ofisi yakho negqwetha lakho. Okokuqala, kufuneka uze nencwadi yakho yomtshato okanye isivumelwano sokuhlala kunye nesivumelwano sokugcina umtshato. Olu xwebhu lubonelela igqwetha ukuba libe nokuqonda ngokwakho nangamaqabane akho exesha lezomthetho kwaye lenza indawo yokuqala yezivumelwano ezingaphezulu. Ngaba wena neqabane lakho langaphambili ninayo (irente) indlu kunye? Ukuba kunjalo, uya kudinga nokuza netyala lakho lobambiso okanye isivumelwano sokuqeshisa kunye nawe endibanweni. Imeko yakho yezemali ikwabalulekile kwimeko yoqhawulo-mtshato. Unokunika igqwetha lakho loqhawulo mtshato ngesishwankathelo seakhawunti zakho zebhanki kunye / okanye ii-akhawunti zokonga, iingxelo zonyaka kunye neengeniso ezintathu zerhafu yokugqibela. Kwaye ekugqibeleni, ulwazi malunga nepenshini yakho, inshurensi kunye nangawo onke amatyala onokuthi ufake kuwo kubalulekile.
Xa abantwana bebandakanyeka, kubalulekile ukuba iimfuno zabo ziqwalaselwe. Siqinisekisa ukuba ezi mfuno zithathelwa ingqalelo kangangoko kunokwenzeka kummiselo. Abameli bethu boqhawulo-mtshato banokwenza isicwangciso sokuba ngumzali kunye nawe apho kunikezelwa khona ukhathalelo lwabantwana bakho emva koqhawulo mtshato. Sinokubala inani le-alimony yabantwana ekufuneka ihlawulwe okanye ifunyenwe.
Ngaba sele uqhawule umtshato kwaye unalo ungquzulwano malunga, umzekelo, ukuthobela iqabane okanye umlingane womntwana? Okanye ngaba unesizathu sokukholelwa ukuba iqabane lakho langaphambili linemali eyaneleyo yokuzinakekela? Abameli bethu boqhawulo-mtshato banokukubonelela nangoncedo lwezomthetho kwiimeko ezinjalo.
Eyakho inkampani kunye noqhawulo mtshato
Ngaba unayo inkampani yakho kwaye uyaqhawula umtshato? Emva koko kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezongezelelweyo. Imibuzo eza kuhlolisiswa ngabameli bethu boqhawulo-mtshato kunye nawe ibandakanya:
• Ngaba unayo izabelo?
• Ngaba izabelo ezi zezoluntu lwepropathi?
Kwenzeka ntoni kwinkampani yakho?
Zithini iziphumo zokohlulelo kwinkampani yakho?
• Zithini iziphumo zerhafu?
Abameli bethu boqhawulo-mtshato banolwazi ngemithetho yosapho kunye neyeshishini eyaziwayo kwaye ke ngoko babekwa ngokukubonelela ngoncedo lomthetho kunye nerhafu kwezi meko. Ngaba uyayifuna igqwetha loqhawulo-mtshato? Unxibelelwano Law & More.
Inkqubo yobuqu kunye nesikhokelo
Ngelixa sicebisa amanye amalungiselelo ngaphambi kokubonisana negqwetha lakho loqhawulo-mtshato, thina Law & More Qonda ukuba uqhawulo-mtshato sisiganeko esisekude ebomini bakho kwaye awunakuba nakho ukubona nokubonisa ikamva lakho ngqo emva koqhawulo-mtshato. Kungako kunjalo Law & MoreAmagqwetha oqhawulo-mtshato aneendlela zawo kwaye kunye nawe kwaye mhlawumbi iqabane lakho langaphambili siza kuchonga imeko yakho yezomthetho ngexesha lencoko ngokusekwe kumaxwebhu. Siza kwenza imephu umbono wakho kunye neminqweno yakho ngekamva. Amagqwetha oqhawulo-mtshato ka Law & More ziingcali kwicandelo labantu kunye nomthetho wosapho kwaye bayonwabile ukukukhokela, ngokunokwenzeka kunye neqabane lakho, kwinkqubo yoqhawulo mtshato.